#Madagascar : Kodiarana namoa-doza – Pasitora maty voapotsitry ny fiara nivadika | ONG Lalana Blog
#Madagascar : Kodiarana namoa-doza – Pasitora maty voapotsitry ny fiara nivadika
Publié le 23 octobre 2012 par Lalana
Patsa iray tsy omby vava. Nitrangana lozam-pamoivoizana nahafatesana olona iray sy nandratra olona valo, ka ny roa no tena voa mafy, teny an-tampon’Ihorombe, 30 km avy eo Ihosy, akaikin’ny tanànan’i Anjihilava sy Bemandresy, ny alahady teo, tamin’ny 6 ora sy sasany maraina. Taksiborosy marika »Sprinter 312 », avy aty Antananarivo ho any Toliara ary nitondra olona 17 ity tra-doza ity.
« Voatsindry teo anelanelan’ny varavarankelin’ny fiara io lehilahy maty io. Ary teo no nisokirana azy. Tao amin’ny laharan-tseza fahatelo no nipetrahany », hoy Rahely, mpamily ny fiara. Voalaza fa pasitora amin’ny fiangonana FLM any Tolagnaro ity maty ity.
Raha ny voalaza dia ny fipoahan’ny kodiarana roa tao aoriana, tamin’ilay fiara no nahatonga ny loza. Tsy voafehin’ilay mpamily intsony ny familiana, nihilangilana ary navadiky ny entana teo ambony tafo avy eo ilay taksiborosy.
Nomarihin’ny mpandeha iray fa “lala-mahitsy be no nizoran’izy ireo ary tsy nandeha mafy firy ilay fiara, noho izy nifanaraka tamin’ny andiana kamiaon’ny orinasa Colas, nihazo an’i Toliara”.
Nalefa notsaboina ao Ihosy ireo naratra.